डा. रेणुकाको दोस्रो उपन्यास ‘चिराक’ वजारमा « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
डा. रेणुकाको दोस्रो उपन्यास ‘चिराक’ वजारमा
७ माघ २०७५, सोमबार १०:४२
नेपाली समाजको लैंगिक विभेदलाई मुख्य आधार बनाएर लेखिएको डा.रेणुका ‘सोलु’को उपन्यास वजारमा आएको छ । शनिवार प्रज्ञा भवन कमलादीमा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो । उक्त उपन्यास सुदुरपश्चिम नेपालको भुगोल, समाज र संस्कृतीलाई चित्रण गरिएको छ ।
महिला हिंसाका घटना अशिक्षित र विपन्न परिवारमा मात्रै नभई शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा पनि विकराल छ भन्ने तथ्यलाई लेखकले पुस्तकमा उतारेका छन् । विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै समालोचक प्रा.डा.लक्ष्मण गौतमले पुस्तकको बलियो पक्ष नै शिक्षित परिवार भित्रको महिला हिंसाको उजार्गर भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
पढाईमा समेत तेज उपन्यासकी मुल पात्र तुलसी कसरी लैंगिक विभेदका कारण पारिवारिक तनावमा पर्छिन् र समानताको अधिकारको लडाईमा चिराक बनेर उभिन्छीन् भन्ने सन्देश पुस्तकले दिन्छ । यौन मनोविज्ञान, पुरुष प्रधान समाज र मानसिक्ताले जगडीएको समाजका खराब पक्षलाई पुस्तकमा पृथक रुपमा समेटिएका कारण पुस्तकको लोकप्रियता बढ्ने समालोचक साहित्यकार गिता केशरीले वताए ।
यस्तै अर्का समालोचक प्रा.डा.ज्ञानु पाण्डेले नारी र पुरुष समाजका समान हैसियतका पात्र भएकाले उनीहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता पनि बराबरी हुनु पर्ने बताए । त्यसका लागि साहित्यीक कृती मार्फत लेखकले न्याय गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।
अर्की साहित्यकार मायाँ ठकुरीले ‘चिराक’ विमोचनकै दिनबाट लोकप्रियताको बाटोमा हिडीसकेको बताए । पश्चीमेली भाषा संस्कृतीलाई दुरुस्तै पुस्तकमा समेटिनु असाधारण भएको बताए ।
सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको २ सय ४० पेजको चिराकको वितरक ऐरावती प्रकाशनले गरेको छ । लेखक रेणुका ‘सोलु’को यो दोस्रो उपन्यास हो । यस अघि उहाँको उपन्यास ‘भिरमह’ बजारमा आएको छ । ‘गुलाफ फूल्न खोज्दा’ आत्मसस्मरण, ‘अस्तीत्वको खोजी’ कथासंग्रह, ‘उपन्यासकार विपीका नारी पात्रमा निती चेतना’ समालोचना लगायत १२ वटा कृती प्रकाशित छन् ।
प्रकाशित मिति: ७ माघ २०७५, सोमबार १०:४२
लकडाउनको समयमा यौनकर्मीले ग्राहक नभेटेपछि भोकमरी
कोरोना संकटका कारण विश्व नै त्रसित भएको छ । यसको रोकथाम गर्न सम्पूर्ण देशहरु लकडाउनको
लकडाउन खोलाइने : कोरोनासँग जुध्न विज्ञहरुको छुट्टै समूह बनाउने सहमति
सरकारले कोरोना भाइरससँग कसरी जुध्ने भन्नेबारे २५ जना विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज दोलखाका
प्रदेश नं २ स्थित रौतहटको राजपुर नगरपालिका-९ बैरियास्थित ठूलो मदरसा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरुको आक्रमणबाट दुई
सप्तरीमा दुई समूहबीच झडप हुदाँ प्रहरीद्वारा ८ राउण्ड हवाई फायर, १५ जना घाइते
प्रदेश नं २ स्थित सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जग्गा सम्बन्धी विवादमा बुधबार बिहान दुई पक्षबीच झडप
नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू-भाग स्पष्ट तोक्न सरकारसँग माग
नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू-भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग
बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग प्रधानमन्त्रीको ४ घण्टा छलफल, लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव
जिससको भूमिका र आवश्यकता माथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सांसदहरुको माग
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : अब बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र पेश्की रकम पाउने